Phenotype 002 Ny Fehin-Tanana - Famolavolana
Ny Fehin-Tanana Ny endrika brasele Phenotype 002 dia vokatry ny simulation nomerika amin'ny fitomboana biolojika. Ny algorithm ampiasaina amin'ny fizotran'ny famoronana dia manome alalana ny fihetsika amin'ny firafitry ny biolojika mamorona endrika organika tsy mahazatra, ny fahazoana hatsarana tsy manelingelina noho ny rafitra tsara sy ny fanaovana ny marina. Ny prototype dia ampiasaina amin'ny teknolojia fanontana 3D. Amin'ny dingana farany, ny tapa-firavaka dia alavina vita amin'ny varahina, voatsindrina ary vita amin'ny antsipirihany amin'ny antsipirihany.
Anaran'ny tetikasa : Phenotype 002, Anaran'ny mpamorona : Maciej Nisztuk, Anaran'ny mpanjifa : In Silico.
Generative, algorithmic ary paramétric design
Ny Fehin-Tanana Maciej Nisztuk Phenotype 002